A DỊGHỊ EWEGHACHI IPHONE SITE NA AYTYUNS - ITUNES - 2019
A pụghị iweghachi IPhone site na iTunes: ụzọ iji dozie nsogbu ahụ
Osisi, yana ihe ndi ozo di iche iche, bu ihe di nkpa nke wenyere Photoshop. Site n'enyemaka nke aka, grids, contours, ngalaba nke ụdị dị iche iche ka e kere, a na-ewukwa ọkpụkpụ nke ihe mgbagwoju anya.
Isiokwu nke taa ga-elekwasị anya na otu esi emepụta akara na Photoshop.
Dika anyi maara site na akwukwo geometry nke akwukwo, uzo di iche, gbajiri ma gbaa.
Nzọụkwụ ziri ezi
Iji mepụta usoro ziri ezi na Photoshop, a na-enye ọtụtụ nhọrọ site na iji ngwaọrụ dị iche iche. A na-enye usoro nhazi niile nke otu n'ime ihe mmụta ndị dị ugbu a.
Ihe omumu: Dee zoro ezo na Photoshop
Ya mere, anyị agaghị anọ na nkebi a, mana gaa na-esote.
Otu polyline mejupụtara ọtụtụ mpaghara akara ogologo, a pụkwara imechi ya, na-eme ka otu polygon. Dabere na nke a, e nwere ụzọ dị iche iche isi wuo ya.
Ihe ngwọta kachasị mfe maka ịmepụta usoro dị otú ahụ bụ ngwá ọrụ. "Ube". Na ya, anyị nwere ike ịbịaru ihe ọ bụla site na nfe dị mfe na nnukwu polygon. Gụkwuo banyere ngwá ọrụ dị na isiokwu ahụ na weebụsaịtị anyị.
Ihe omumu: Ngwa Ngwá Ọrụ na Photoshop - Theory na Practice
Iji mezuo ihe a choro, o zuru ezu iji tinye ọtụtụ isi okwu na kwaaji,
Mgbe ahụ, kọnye ihe na-emepụta otu n'ime ngwá ọrụ (gụọ ihe mmụta banyere Pen).
Nhọrọ ọzọ bụ ime ka akara agbajiri ọtụtụ usoro. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta ihe mbụ,
mgbe nke a gasị, site na ịpịnye ihe ndị ahụ (CTRL + J) na nhọrọ "Na-agbanwe agbanwe agbanwe"isi rụọ ọrụ CTRL + T, mepụta ụdị dị mkpa.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, akara a bụ polygon. Enwere ụzọ abụọ iji wuo polygons - iji ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị site na otu "Ọgụgụ", ma ọ bụ site na ịmepụta nhọrọ nchịkwa na-esoteghị na ọrịa strok.
Ihe omumu: Ngwaọrụ maka ịmepụta ihe na Photoshop
Mgbe itinye usoro a n'ọrụ, anyị na-enweta ọdịdị geometric na nha anya na akụkụ.
Iji nweta akara (contour) ozugbo, ịkwesịrị ịtọ ọrịa strok, a na-akpọ "Egbugbu". N'ọnọdụ anyị, ọ ga-abụ ọnyá siri ike nke ọkwa na agba.
Mgbe ịkwụsị jupụta
anyị na-enweta ihe a chọrọ.
Ogugu a nwere ike mebie ma gbanwee site na otu "Na-agbanwe agbanwe agbanwe".
Na ngwaọrụ a, ị nwere ike ịme polygons nke nhazi ọ bụla. Mgbe ịmechara ọtụtụ isi, a na-ahọrọ mpaghara a họrọ.
A ghaghị ịgbagharị nhọrọ a, bụ nke nwere ọrụ kwekọrọ na ya, nke a na-akpọ site na ịpị PKM na canvas.
Na ntọala ị nwere ike ịhọrọ agba, nha na ọnọdụ nke ọrịa strok.
Iji nọgide na-adị nkọ nke akụkụ, a na-atụ aro ọnọdụ ahụ "N'ime".
Mkpụrụ akwụkwọ nwere otu ihe ndị ahụ dịka eriri agbajiri, ya bụ, ha nwere ike mechie ma mepee. Ị nwere ike ịdọrọ eriri eriri n'ọtụtụ ụzọ: na ngwaọrụ "Ube" ma "Lasso"eji ụdị ma ọ bụ nhọrọ.
Nke a nwere ike adọta naanị "Pen" (ya na njiri aka), ma ọ bụ "n'aka". N'okwu mbụ, ihe mmụta ahụ ga-enyere anyị aka, njikọ nke dị elu, na nke abụọ ọ bụ aka aka.
Ngwá ọrụ a na-enye gị ohere ịmepụta oghere mechiri emechi nke ụdị ọ bụla (ngalaba). Lasso na-emepụta nhọrọ, nke, iji nweta akara ahụ, ị ​​ghaghị ịkpụgharị n'ụzọ mara.
Na nke a, ihe nke omume anyị ga-abụ gburugburu nke ziri ezi ma ọ bụ nke ellipsoid.
Maka nkwarụ ya zuru ezu iji kpatara "Na-agbanwe agbanwe agbanwe" (CTRL + T) na, mgbe ịpịrị PKM, họrọ ọrụ ọzọ kwesịrị ekwesị.
Na grid nke na-egosi, anyị ga-ahụ ihe akara, site na-adọta na nke a, anyị nwere ike imezu ihe a chọrọ.
Okwesiri iburu n'obi na na nke a, mmetuta a na-agbanye aka n'osisi.
Usoro na-esonụ ga-ekwe ka anyị zọpụta ọnụọgụ niile.
Jiri ngwá ọrụ ahụ "Ellipse" na, itinye ntọala ahụ a kọwara n'elu (dịka maka polygon), mepụta gburugburu.
Mgbe mmezigharị anyị ga - enweta nsonaazụ ndị a:
Dịka ị na-ahụ, ọkpụrụkpụ nke akara ahụ agbanwebeghị.
Na nkuzi a, ihe e kere eke na Photoshop gafere. Mụ na gị mụtala otu esi emepụta ụzọ dị iche iche, gbagwojuru agbaji ma gbuchie ụzọ dị iche iche site na iji ngwaọrụ dịgasị iche iche nke usoro ihe omume ahụ.
Echefukwala nkà ndị a, ka ha na-enyere aka ịmepụta ụdị ọdịdị nke geometric, contours, dịgasị iche iche na osisi na foto Photoshop.